“Chelsea waxay u xanuunsan tahay maskax ahaan” – Maurizio Sarri – Gool FM
“Chelsea waxay u xanuunsan tahay maskax ahaan” – Maurizio Sarri
(Chelsea) 24 Dis 2018. Chelsea ayaa la kulantay guuldaro sabtidii lasoo dhaafay kulankeeda 18-aad horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan, kadib markii ay kooxda Leicester City ugu awood sheegatay 1-0.
Waxa ugu xun ayaa ah in kulankan ay guuldarada la kulantay kooxda Chelsea uu ka dhacay garoonkeeda Stamford Bridg.
Isku dayga ah in Eden Hazard uu ka ciyaaro booska weerarka marka ay la ciyaarayaan koox u xoogan dhanka awooda jirka ayaa noqatay arin musiibo ah, inkastoo uu helay fursado dhowr ah, gaar ahaan qeybtii hore ee ciyaarta.
Hadaba Maurizio Sarri oo ka hadlayay xaalada kooxdiisa ayaa yiri: “Ma doonayo inaan keeno qof walba ee ka shaqeyn kara dhanka maskaxda kooxda sababtoo ah ma ahan mid sahlan”.
“Waxaan ku heystay dalka Talyaaniga dhakhtar ku takhasusay cili nafsiga isboortiga mudo 15 sano ah, waa arin aad u adag, balse kooxaha diyaar uma ahan in ay talaabadan qaadaan”.
“Waa arin musiibo ah, kama hadli karno tartanka horyaalka Premier League wixii xiligan ka dambeeya, hadii aanan guuleysan Karin kulamadan oo kale, sababtoo ah ma awoodno inaan tartan galno”.
“Waxaa laga yaabaa in guuldarada ay sabab u tahay inaan luminay fikirka saxda ah, waana arin doqonimo ah in sidaas ay dhacdo”.
“Liverpool ma sii heyn doonto hogaanka horyaalka Premier League” - Rooney